Gịnị bụ uru nke ọhụrụ chili azuokokoosisi ọnwụ igwe - China Lu Lu Agricultural Equipment
Chili azuokokoosisi ọnwụ igwe
Large chili azuokokoosisi ọnwụ igwe
Ọkara chili azuokokoosisi ọnwụ igwe
Obere chili azuokokoosisi ọnwụ igwe
Chili nkume wepụ igwe
Chili ọnwụ igwe
Chili nhazi usoro
Chili Agba Sorting Machine
Ịga nke Ọma ikpe
Patent maka mepụtara
Gịnị bụ uru nke ọhụrụ chili azuokokoosisi ọnwụ igwe
Gịnị bụ uru nke ọhụrụ chilli azuokokoosisi ọnwụ igwe? Chili azuokokoosisi ọnwụ igwe bụ akụkụ dị mkpa nke na-akọ ugbo mmepụta n'ebe ụfọdụ. Ọ bụ ihe na-apụghị izere ezere chọrọ ugbo na mmepe na-chepụta a ezi uche na oru oma chili azuokokoosisi ọnwụ igwe. A zuru ezu capsicum dispenser mejupụtara ise n'akụkụ: udia usoro, nnyefe usoro, gripping usoro, na ebutu usoro.
Gịnị bụ atụmanya nke chili azuokokoosisi ịcha igwe? The ajụjụ na-adịghị ga-aza ngwa ngwa. N'ihi na n'ezie mmepụta na ndụ, ọ bụghị ike na-chọta a nta anya na-edebe. Na-adịbeghị anya, n'ozuzu ọkọnọ na ina nke chili ngwaahịa amụbawo isua ke isua oge na-aga. Ugbu a, naanị na Qingdao, e nwere ọtụtụ obodo nta na obodo nta aku na mmepụta na nhazi nke chili ngwaahịa na a nnukwu ọnụ ọgụgụ. N'ihi ya, ọnụ ọgụgụ nke ndị nwere ahịa nke chili azuokokoosisi ọnwụ igwe ka nnọọ ịtụnanya. Ke adianade do, gafee mba, Hunan, Sichuan na n'ógbè ndị ọzọ china nwekwara nnukwu emepụta nke chili anāchi achi. Na na ụfọdụ n'ime ebe ndị a, The ọrụ chili ngwaahịa ka na mbụ ogbo nke handwork, n'ihi ya, mgbe e nwere a chili igwe etinye chili ígwè na ahịa, ọ ga-apụghị izere ezere na-nabatara site sara ọnụ ọgụgụ nke oru ugbo enyi. Na ndị dị otú a ngwaahịa ga-enyere gị aka melite arụmọrụ nke chili mmepụta.
Na-aga n'ihu mmepe nke nkà na ụzụ, nile di iche iche nke ga-adaba adaba na ígwè ọrụ ná ndụ, ha na-amalite na-egosi na ndị ahịa. chili azuokokoosisi ọnwụ igwe bụ nakwa otu onye n'ime ha. Olee otú aka ndị dị otú ahụ di iche iche nke chili? O nwere ike ka na-adị mkpa ịhọrọ site na ndị dị otú ahụ na ọrụ na ụkpụrụ ya.
Structure na arụmọrụ:
1.Performance atụmatụ: a akụrụngwa na-bụ-eji maka akọrọ na mmiri chili akpacha ajị, na ngwá ịcha arụmọrụ elu, chili mmebi ala, elu nrụpụta, imeghari iche iche iche na chili udi (Mkpa ahaziri), na otu igwe nrụpụta bụ karịa 5 ugboro nke ahịa nkịtị ngwaahịa, arụmọrụ nke dum igwe ruru mba eduga larịị. Ngwaahịa a, gbakwunyere site inyeaka ngwá dị ka wepụ adịghị na-erute, nwere ike ime ka akpaka arụmọrụ nke dum igwe egwu a dị ịrịba ama ọrụ. Ọ bụ ihe dị mkpa ngwá maka nhazi nke a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke na-akọ ugbo na ngwaahịa. Ọ nwere ike na-eji dochie a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke manpower, chekwaa ọrụ na-eri, na mma n'ụzọ dị ukwuu na-arụ ọrụ arụmọrụ.
2. Main arụ ọrụ ụkpụrụ: na usoro nke na myọ drum Rolling, n'èzí ọnwụ mma na myọ cylinder mgbidi na-emepụta ihe igwe na chili handle na-agabiga myọ oghere mgbabere uzo agha, iji nweta nzube nke wepụ ahụ nke chili.
Post oge: Sep-10-2018
Okwu: Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong, Jiaolai Industrial Park
Ekwentị: +86 13361271555
Mgbe anyị na-ịcha ọhụrụ chili, anyị aka ọ bụghị ...
Gịnị bụ ahịa pụtara chili ...
Gịnị bụ isi n'ihi na anya na ...
Gịnị bụ uru nke ọhụrụ chili azuokokoosisi ...
Gịnị bụ uru nke chilli azuokokoosisi cu ...